Iyo iPhone 7 inogona kuve neyakaomeswa-inonzwika bhatani repamba | IPhone nhau
IPhone 7 inogona kunge iine bhatani-inonetseka pamba bhatani
Kana pasina zvekushamisika, iyo iPhone 7 Ichazoratidzwa munenge mwedzi mishanu. Tatova pakupera kwaApril, kubva ikozvino makuhwa achawedzera muhuwandu uye kuwanda kusvikira zuva rekuratidzwa uye isu tichazototanga kuona izvo chaizvo zvikamu zveinotevera apple apple. Imwe yeguhwa inovimbisa kuti iyo iPhone 5 ichave kusagadzikana kwemvura uye guruva, chimwe chinhu chisingashamisi kana isu tichifunga nezve kuramba kwemvura iyo iyo iPhone 6s yatove nayo.
Mwedzi yapfuura, veDigiTimes midhiya vakatotaura nezve mukana uyu uye ikozvino unotarisa pachinongedzo cheiyo iPhone iripo kubva kune yekutanga modhi, bhatani bhatani kuti vashandisi vazhinji vangasarudza kusavapo. Maererano DigiTimes, bhatani repamba reiyo iPhone 7 richava kumanikidza kunzwisisika, izvo zvinogona kureva kuti inenge ichimhanya nepamberi pani. Asi zvinoreva here kuti hatichazviona?
Iyo iPhone 7 inogona kuve yekutanga isina bhatani repamba
Haisi nguva yekutanga kuti vamwe vezvenhau vataure nezve iPhone isina bhatani rekutanga, asi pese paitaurwa nezvayo munguva yakapfuura, sekuona kwawakaita, haina kubudirira. Kunyangwe paine ruzivo rwakasiyana runovimbisa kuti imwe iPhone ichavhurwa gore rinouya, Apple yagara ichitangisa a dhizaini nyowani makore maviri ega ega, saka iyo iPhone 7 inofanira kusanganisira chimwe chinhu chitsva mune izvi. Hazvina musoro kufunga kuti, kana iyo iPhone isina bhatani repamba ikatangwa, iyi inogona kunge iri iyo iPhone 7.
Chero zvazviri, DigiTimes inorova zvakapotsa zvapotsa mune zvaunofungidzira, saka hatifanirwe kuvimba zvakanyanya neruzivo rwako, kunyangwe iwe ukati zvinobva kuApple cheni yekutengesa. Kusvikira iyo iPhone 7 yaunzwa zviri pamutemo, isu hatigone kugamuchira chero chero ruzivo senge rwakanaka, kana zvisiri izvo ivo vanotaurira iyo 12Mpx yeiyo iPhone 5s.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » IPhone 7 inogona kunge iine bhatani-inonetseka pamba bhatani
Podcast 7x06: Rose Goridhe haisi yevasikana